(ဘယ်ဘက်က MI စစ်ထောက်လှမ်းရေး အဖြစ် သရုပ်ဆောင်သူကတော့ ကိုခင်မောင်ရင် ဖြစ်ပြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးအဖြစ် ဦးထွန်းလင်းက သရုပ်ဆောင်ပါတယ်..)
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ The Lady ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို လာမည့်အောက်တိုဘာလမှာ ကမ္ဘာနဲ့ အဝှမ်းရုံတင် ပြသမှာ ဖြစ်ပါတယ်...။ Drama / Romance / ဘဝသရုပ်ဖော်တွေ ပါရှိတဲ့ အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအား ပြင်သစ်ဒါရိုက်တာ Luc Besson ကရိုက်ကူးပြီး EuropaCorp, Left Bank Pictures, France2Cinema ကုမ္ပဏီတွေက ထုတ်လုပ် ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်...။
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Saturday, May 14, 2011
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Thursday, May 12, 2011
Posted by Niknayman at Wednesday, May 11, 2011
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Wednesday, May 11, 2011
၂၀၁၁ ခုနှစ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဆန်ခါတင် ၅ ဦး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဖွဲ့စည်း နိုင်ရေး အတွက် အဓိက တိုက်တွန်း ခဲ့သူမှာ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြစ်သည်။
စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က တာဝန်ယူခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ
(၁) ဦးဝင်းထိန် - (ဥက္ကဋ္ဌ)
(၂) ဦးအုန်းမြင့် (သခင်အုန်းမြင့်) - (ဒုဥက္ကဋ္ဌ) (ကွယ်လွန်)
(၃) ဦးကျော်မင်း (ပုသိမ်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်) - အဖွဲ့ဝင် (ကွယ်လွန်)
(၄) ဦးသိန်းတင် (ရန်ကုန်တိုင်းစည်း)- အဖွဲ့ဝင် (ကွယ်လွန်)
(၅) ဒေါ်စန်းစန်း (ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်) - အဖွဲ့ဝင်
(၆) မနီနီဝေ (လူငယ်) - အဖွဲ့ဝင်
(၇) ကိုတင်လှိုင် (ခ) ကိုအီဗား (လူငယ်) - အဖွဲ့ဝင်
စတင်စဉ် ကပင် တစ်ဦးချင်း သဒ္ဓါပေါက်သူများ လှူဒါန်းသော အလှူငွေများဖြင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား များအား တစ်ဦးလျှင် ၅၀၀ ကျပ်နှုန်း လစဉ် ထောက်ပံ့ ခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ မေလတွင် ဦးဝင်းထိန်၊ ဦးကျော်မင်း၊ ဦးသိန်းတင်၊ ကိုတင်လှိုင် (ခ) အီဗား တို့ အထိန်းသိမ်း ခံခဲ့ရပြီးနောက် သခင်အုန်းမြင့်က ဦးစီး၍ သင့်လျော်သော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ ထောက်ပံ့ငွေ ကိုလည်း တစ်လလျှင် ၁၀၀၀ ကျပ် / ၁၅၀၀ ကျပ် စသဖြင့် ပိုမို ထောက်ပံ့ နိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ စ၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးက ဦးစီးပြီး ဦးတင်ဦး(ဥက္ကဋ္ဌ)၊ သခင်အုန်းမြင့်( ဒုဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဦးလှသိန်း (တာမွေ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်)(အတွင်းရေးမှူး) ၊ ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းတို့က တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်း အရေးအခင်း ပြီးနောက် သခင်အုန်းမြင့်၊ ဦးအောင်စန်းမြင့်၊ ဦးလှသိန်း၊ ဦးသိန်းဦး တို့က တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ စ၍ အဖွဲ့ကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လက်ရှိ တာဝန်ယူ သူများမှာ ဦးတင်ဦး (ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဦးနိုင်းနိုင်း၊ ဦးဝင်းထိန်၊ ဒေါ်ခင်သန်းလှ၊ ဦးစောလှိုင်၊ ဦးလှသိန်း၊ ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း(ကြည့်မြင်တိုင်)၊ ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း(စမ်းချောင်း) တို့ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၆၀၀ ကျော် တို့အား တစ်ဦးလျှင် တစ်လ ၅၀၀၀ ကျပ်စီဖြင့်၎င်း၊ မဲစနစ်ဖြင့် တာဝန် ယူသော ထောက်ပံ့သူများ ဖြင့်သော်၎င်း၊ ဆေးရုံ တက် နေရသော အကျဉ်းသား များအား ကျပ် ၁သောင်းမှ ၅ သောင်း အထိ၎င်း၊ အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာသူများအား တစ်ဦးလျှင် ခရီးစရိတ် ၁ သောင်းစီ ဖြင့်၎င်း တိုးချဲ့ ထောက်ပံ့ လျက်ရှိသည်။
လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားမှု အချို့မှာ -
NLD လူမူ အထောက်အကူ အဖွဲ့ ကနေ ဖွင့်ထားတဲ့၊ အထူးသဖြင့် NLD လူငယ်တွေနဲ့ ကျောင်းသား လူငယ်တွေ ဦးဆောင်ပြီး ဆင်းရဲသော ကလေးငယ် တွေအတွက် လှိုင်သာယာ မြို့နယ်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ အမေ့အိမ် စာသင်ကျောင်း လေးပါ။ စာသင်ကျောင်းရဲ့ မြေနေရာကို လှူဒါန်းတဲ့ ပိုင်ရှင် ကတော့ NLD လှိုင်သာယာ မြို့နယ်စည်း အဖွဲ့ဝင် ကိုအေးဘို ဖြစ်ပါတယ်။ စာသင်ပေး နေသူ အများစု ကတော့ NLD လူငယ် ခေါင်းဆောင် တွေနဲ့ လူငယ် အဖွဲ့ဝင်တွေ များပါတယ်။ အချို့ NLD မဟုတ်တဲ့ ကျောင်းသား လူငယ် တွေလည်း လာပြီး ကူညီပြီး သင်ပေးနေပါတယ်။
အမည်ရင်း ဦးသူရ (ခေါ်) ကိုဇာဂနာဟာ ရန်ကုန်မြို့ဇာတိဖြစ်ပြီး၊ စာရေးဆရာကြီးနန်းညွန့်ဆွေ နဲ့စာရေးဆရာမကြီး ဒေါ်ကြည်ဦးတို့က ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
ကိုဇာဂနာဟာ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန်မြို့ သွားဖက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်က သွားဖက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ဘွဲ့ ကို ရရှိ ခဲ့ပေမယ့် သွားဆရာဝန် တဦးအဖြစ် အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမပြုခဲ့ဘဲ ပြည်သူက ချစ်တဲ့ အနုပညာရှင် တဦး ဘဝကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုဇာဂနာဟာ ရုပ်ရှင်၊ သဘင်၊ ဂီတ၊ စာပေ ဘက်စုံထူးချွန်တဲ့ စွယ်စုံရ အနုပညာရှင် တဦးဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များမှ စလို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထင်ရှားဆုံး လူရွှင်တော် တဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စူးရှတဲ့ အတွေးအမြင်တွေကနေ ပေါက်ဖွားလာခဲ့တဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ ပျက်လုံးတွေဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဘဝအမောတွေကို သက်သာပြေပျောက် စေခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူလူထုနဲ့ တသားတည်း ရှိခဲ့တဲ့ ကိုဇာဂနာဟာ အမှန်တရားကို လိုလားသလို တာဝန်သိသူ ရဲရင့်သူ တဦးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဇာဂနာဟာ သူ့ရဲ့ နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ ဖမ်းဆီး အကျဉ်းချခြင်း ခံခဲ့ရ ရုံ သာမက သူ့ရဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုပါ ပိတ်ပင် တားဆီးခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၀၈ခုနှစ် မေလ အတွင်းမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်း ကြောင့် ပြည်သူလူထု သိန်းနှင့်ချီ အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ဘေးဒုက္ခ ကြီးစွာ ကျရောက် ခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုဇာဂနာဟာ မေလ ၃ ရက်နေ့ နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်အပြီး ၄ ရက်အကြာ ကစပြီး လေဘေး ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို အနုပညာရှင်ပေါင်း များစွာနဲ့ တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ကိုင် ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ။ ခရီး လမ်းပန်း အခက်အခဲမျိုးစုံ၊ အနှောက်အယှက် အတားအဆီး မျိုးစုံကြားက ဒုက္ခအတိ ရောက်နေကြတဲ့ လေဘေးသင့် ပြည်သူလူထုထံ အကူအညီတွေ အမြန်ဆုံး ရောက်ရှိအောင် နည်းလမ်းမျိုးစုံ အသုံးပြုပြီး လျင်မြန်သွက်လက် ထိရောက်စွာ မနေမနား ဆောင်ရွက်နိုင် ခဲ့ပါတယ် ။ ပြည်သူလူထုကိုလည်း မီဒီယာတွေက တဆင့် အမြန်ဆုံး သတင်းပို့ ရှင်းပြ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်အပြီး တလခန့် အကြာမှာ ကိုဇာဂနာနဲ့ သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၄၀၀ ကျော်တို့ဟာ ကယ်ဆယ်ရေးအပြင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေကိုပါ ပူးတွဲလုပ်ကိုင် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ စာနယ်ဇင်းတွေက “နိုင်ငံတော်က မုန်တိုင်းကယ်ဆယ် ရေးကို ကောင်းမွန် ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ကြောင်း” ၀ါဒ ဖြန့်နေခဲ့ချိန်မှာ၊ ကိုဇာဂနာ ဦးဆောင်တဲ့ လူငယ်နဲ့ အနုပညာရှင်တွေ၊ ကိုကျော်သူ, မရွှေဇီးကွက်တို့ ဦးဆောင်တဲ့ နာရေးကူညီမှု အသင်းကြီးနဲ့ မြန်မာလူငယ် စေတနာရှင် အစု အဖွဲ့တွေဟာ မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ စောလျင်စွာ ကိုယ့် အားကိုယ်ကိုး ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ကြသလို၊ ဆရာတော်များ၊ သံဃာတော်များ ကလည်း တတပ်တအား ဦးစီး ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲသလို မြန်မာပြည်တ၀ှမ်း လူထုလူတန်းစား အသီးသီးက စေတနာ ထက်သန်စွာ လိုက်လံ ၀ိုင်းရံနေကြချိန်မှာ ကိုဇာဂနာ ဖမ်းဆီး ထိမ်းသိမ်း ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်း ဖျာပုံမြို့နယ် မိန်းမလှကျွန်း ဘက်မှာရှိတဲ့ ချောင်းရိုးတလျှောက် အကူအညီမရ ဖြစ်နေကြတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို အစားအစာနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်တွေ ကိုယ်တိုင်သွားရောက် အကူအညီပေးပြီး မကြာခင်မှာ အဖမ်းခံ ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ အတွက် အလှူရှင်တွေ၊ လုပ်အားပေး စေတနာရှင်တွေနဲ့ ပရိသတ် အားလုံးကို စည်းရုံးနိုင်သူ၊ အလုပ် ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်သူ၊ ရဲရင့်ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆို တင်ဆက်နိုင်သူ ကိုဇာဂနာဟာ ရန်ကုန်ကို ပြန်ရောက်လာ ပြီးနောက် သူမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ လေဘေးဒဏ်သင့် ပြည်သူတွေရဲ့ ဒုက္ခ အခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင်နေကြရပုံ၊ အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေ လူထုဆီ အချိန်မီ မရောက်ရှိပုံ၊
စေတနာရှင်တွေ လုပ်အားပေးတွေက ယခုထက် ပိုမို လျင်မြန် ထိရောက်အောင် ကူညီပေးနိုင်ရေး အတွက် မလိုလားအပ်တဲ့ အခက်အခဲ အတား အဆီးတွေ ဖယ်ရှား ပေးသင့်ပုံ၊ စတဲ့ အတွေ့ အကြုံနဲ့ ခံ စားချက်တွေကို မီဒီယာတွေ ကတဆင့် ပြည်သူများထံ လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ဝေဖန် ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်။ အဲသလို ဝေဖန် ပြောဆို မှုတွေ အပြီးမှာ ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ရပါတယ်။ ကနဦးက ထောင်ဒဏ်၅၉နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး ၂၄နှစ် လျော့ပေါ့ပေးသည် ဆိုတဲ့ အတွက် ထောင်ဒဏ် ၃၅နှစ် ကျခံ နေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တခေတ်မှာ တယောက်သာ ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့ အချစ်တော် လူရွှင်တော်ကြီး ကိုဇာဂနာဟာ အခုလို ပြည်သူ့ ဂုဏ်ရည် အခမ်းအနားကြီး ကျင်းပနေချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းက ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနား အကျဉ်းထောင် ထဲမှာ ရှိနေ ပါ လိမ့် မယ်။
ပြည်သူ လူထုရဲ့ ဒုက္ခ ဆင်းရဲ တွေကို မျှဝေ ခံစားရင်း နာဂစ် လေမုန်တိုင်းသင့် ပြည်သူတွေရဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားကြီးကို ပြည်သူ တွေက ဘယ်တော့မှ မမေ့ မလျော့ဘဲ အစဉ်အမြဲ ကျေးဇူး တင်နေကြမှာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါတော့တယ်။
မဖြူဖြူသင်းဟာ ရန်ကုန် ဇာတိ ဖြစ်ပြီး ၁၉၇၂ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွား ခဲ့ ပါတယ်။ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှာ သမိုင်း ဘာသာ အဓိကဖြင့် ပညာ သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လူငယ် အဖြစ် ပါတီ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် နေစဉ် ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက် နဲ့ လူငယ် ၂၀ ဦး စိစစ်ရွေး ချယ်ရာမှာ တဦး အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပြီး UNDP ရုံးက HIV ကာကွယ် တားဆီးရေးနဲ့ ပြုစု စောင့်ရှောက် ရေးသင်တန်းကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကနေစပြီး HIV/AIDS ကူညီကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ဆောင် ခဲ့ပါတယ်။ ၄င်းတို့ အဖွဲ့ စတင် တည်ထောင်စဉ် ကပင် အဖွဲ့ ချုပ်လူငယ်များ နဲ့ စတင်ခဲ့သဖြင့် အာဏာပိုင်များရဲ့ နှောင့်ယှက်မှု များကို အမြဲလိုလို ကြုံတွေ့ ခဲ့ရပြီး ဖမ်းဆီးခံရမှု များပင် ရှိခဲ့ပါတယ်။ NGO တွေက နိုင်ငံရေးနဲ့ မပတ်သက်ရဘူး ဆိုတဲ့ အတွက်ကြောင့် လဲ ဘယ် NGO ကမှ သူတို့ကို မကူညီရဲ ကြပါဘူး။ မဖြူဖြူသင်း ခေတ္တတိမ်းရှောင်နေစဉ်အတွင်း သူမရဲ့ ဖခင်ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဖခင်ကြီးရဲ့ နောက်ဆုံး ခရီး ကို ပင် လိုက်ပါ ပို့ဆောင် ပေးနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
လုပ်ငန်း စတင်တဲ့အချိန်က ရောဂါသည်များကို အားပေးမှုအပိုင်းသာ လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်လို့ အခုဆိုရင် လူနာ များကို အေ အာ ဗွီ ဆေးများ တိုက်ကျွေးနိုင်ခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းတာဖြင့် ယခုအချိန်မှာ လူနာပေါင်း လေးထောင်ကျော်ရှိနေပြီိး အခက်အခဲပေါင်းများစွာကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရပါတယ်။ လူနာများအားတတ်နိုင်သလောက် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေရာမှာ သူမ ရဲ့ မိသားစုများကပါ ကူညီပေး ခဲ့ကြပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ (UN AIDS) က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းများအရ မြန်မာပြည်မှာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသူ (၃) သိန်း (၆) သောင်းကျော်ရှိပြီး အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အသုံးစရိတ်ကတော့ တနှစ်အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာတသိန်း ဝန်းကျင်သာ ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒီပမာဏကနေ လူတဦးချင်းစီ ပျမ်းမျှရရှိမယ့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှုန်းကတော့ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အစိုးရက နိုင်ငံသားတဦးအတွက် အကုန်အကျခံတဲ့ ပမာဏထက် အဆပေါင်း (၂၅ဝ) ခန့် လျှော့နည်းတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကုလ သမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးရဲ့ စာရင်းဇယားများက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါနှင့် ပတ်သက်ပြ်ီး ကာကွယ်တားဆီးရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရာမှာ အန်ဂျီအိုများအနေနဲ့ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ/ အေအိုင်ဒီအက်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲ ကျင်းပမယ်ဆိုရင် အစိုးရထံသို့ ခွင့်ပြုချက်အဆင့်ဆင့်တင်ရခြင်း ၊ လူဦးရေ ကန့်သတ်ပေးခြင်း၊ နေရာဒေသ ကန့်သတ်မှုများရှိနေခြင်း တို့အပြင် နယ်ဒေသများသို့ သွားရောက်ပညာပေးမယ် ဆိုပါက သွားရောက်ခွင့်ကို အဆင့်ဆင့် တောင်း ခံရခြင်း တို့ကြောင့် NGO, INGO အများစုတို့မှာ အကန့်အသတ်တွေများပြားလာခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကြောင့် AIDS ကာကွယ်တားဆီးရေး လုပ်ငန်းတွေပါ အားနည်းလာခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးဆိုက်ရောက် ခဲ့ရပါတယ်။ မဖြူဖြူသင်းလို မေတ္တာ၊ကရုဏာအပြည့်နဲ့ အပင်ပန်း၊ အဆင်းရဲခံပြီး၊ ကျယ်ပြန့်ထိရောက်စွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကတော့ သူမရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အရည်အချင်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။
မဖြူဖြူသင်းဟာ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်မှစ၍ တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ရပ်ကွက်(၁၈) နဲ့ (၂၀) ရှိ ကယ်ဆယ်ရေးဂေဟာ (၂) ခု
ကို ဦးဆောင် တာဝန်ယူခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်ထိ အဆိုပါ ဂေဟာများဟာ နိုင်ငံတဝှမ်းမှ ဝေဒနာရှင် ငါးထောင်ကျော်ကို အခမဲ့ ဆေးဝါး အကူအညီ ပေးနိုင်ခဲ့ပြီ လို့သိရပါတယ်။ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကိုသွား ရောက်ပြီးတော့လဲ ပညာပေး အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
မဖြူဖြူသင်းဟာ HIV/AIDS ကာကွယ် တားဆီးရေးနဲ့၊ ရောဂါ ဝေဒနာသည်များ ပြုစု စောင့်ေ ရှာက်ရေး၊ လုပ်ငန်းထဲမှာ သူမ ဘဝကို မြုပ်နှံ လုပ်ကိုင်နေတာ ပါ။ မိသားစု၊ အပေါင်းအသင်း များကို လျစ်လျှူရူပြီး သူမ ရဲ့လူနာများ နဲ့သာ သူမ ရဲ့အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံး စေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးလင်းလို့ အိပ် ယာထတာနဲ့ မဖြူဖြူသင်း
ရဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ လူနာတွေ တန်းစီနေပြီး မအိပ်ခင် အချိန်ထိ သူမရဲ့ လူနာ များကို အားပေး နှစ်သိမ့် ဆွေးနွေးမှု ပေးနေ ခဲ့ပါတယ်။
မဖြူဖြူသင်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များဟာ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း များရဲ့ ကူညီ ပံ့ပိုးမှု မရရှိ တဲ့အပြင် ၄င်းရဲ့ လှုပ်ရှားမှု များကို တချိန်လုံး စောင့်ကြည့် ခံနေခဲ့ ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆေးဝါးနဲ့ ကာကွယ် ကုသရေး အထောက် အကူ ပစ္စည်းများ မလောက်ငှတဲ့ အခက်အခဲများ ကြားထဲကနေ တည်တည် ငြိမ်ငြိမ်ဖြင့် အကူအညီ လိုအပ်နေတဲ့ ရောဂါ ဝေဒနာသည် များကို နေ့ည မရွေး ပြုစု စောင့်ရှောက် နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်မြင် ကူညီပေးသူတယောက်ရဲ့ ပြောကြားချက်မှာတော့ သူမ လူနာတစ်ယောက်ကို ဆေးသွင်းပေးနေစဉ် လူနာမှာ သွေးများရွှဲအိုင်နေပြီး၊ သူမရဲ့ လက်မှာလည်း သွေးများ ရွှဲအိုင်နေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုသာဆိုရင် သာမန်လူများအနေနဲ့ ကြောက်လန့်တကြား ထွက်ပြေးပြီးလောက်ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ မဖြူဖြူသင်းကတော့ လူနာကိုမကြောက်နဲ့၊ ဒါကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီး နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး ပေးနေပါတယ်။ ဒီသွေးမှတဆင့် ကူးစက်နိုင်တာကို သိလျက်နှင့် မဖြူဖြူသင်းရဲ့ ကြီးမားတဲ့ မေတ္တာစေတနာကို အထင်အရှားတွေ့နိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တခုပါ။ ဝေဒနာကြောင့် ဘယ်လောက်ပဲ အမောဖောက်နေပါစေ၊ “အမရဲ့မျက်နှာ၊ အမပြောတဲ့နှစ်သိမ့်စကားတွေကို ကြားတာနဲ့ ရောဂါတဝက် သက်သာတယ်” လို့ အားကိုးတကြီး ပြောကြတဲ့ လူနာပေါင်း များစွာ ရှိပါတယ်။ လူနာများဟာ သူမအိမ်ကို တံခါးမရှိ ဓားမရှိ ဝင်ထွက်စားသောက်၊ နေထိုင်ကြပြီး လမ်းစရိတ်လိုကိစ္စများမှအစ ဖြေရှင်းပေးနေရ တာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ယဉ်ကျေးမှုအရ မပွင့်လင်းသော၊ အသိပညာနောက်ကျနေသော၊
လွဲမှားသောအမြင်များဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှလက်မခံဘဲ AIDSရောဂါသည်တွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိသော လူနေမှု အသိုင်းအဝိုင်းမှာ အခုလို မကြောက်မရွံ့ ဖောက်ထွက်ပြီး အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေရဲ့ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ကာ ကျန်းမာရေးအသိ ကျယ်ပြန့် ပွင့်လင်းလာအောင် အန္တရာယ်နဲ့ စွန့်စားရတဲ့ ကူညီပေးမှုပါ။
အေ ကိုက်မယ်လို့ နောက်ပြောင်ခဲ့ရင် “မဖြူရှိတယ် မကြောက်ဘူး” ဆိုတဲ့ စကား က သူမအပေါ် ချစ်ခင်လေးစားမှုနဲ့ အားထားယုံကြည်မှုကို ဖော်ပြနေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မဖြူဖြူသင်းဟာ တုနိုင်းမရတဲ့ မေတ္တာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ရန်သူမိတ်ဆွေမရွေး ကူညီတတ် ခြင်းကြောင့် ဝေဒနာသည်တွေရဲ့ ဂရုဏာရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးက အသိအမှတ်ပြု လေးစားခြင်း ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ အကြပ်အတည်းအမျိုးမျိုးကြားကနေ ရုန်းကန်ရင်ဆိုင်ရင်း လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မို့ အခုလက်ရှိကာလမှာ ရောဂါဝေဒနာရှင်များသာမကဘဲ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကပါ ယုံကြည်လေးစား လာခြင်းတို့ကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဒါဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်လူငယ်များအတွက် အများအကျိုးဆောင်ရွက်ရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို စိတ်ပါဝင်စားလာစေရန် စံနမူကောင်းတရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
နိုင်ငံရေးအမှုအခင်းများကို အခမဲ့လိုက်ပါ အကျိုးဆောင်ပေးရန် ဥပဒေကျောင်းသား လူငယ်များကို စည်းရုံးစုစည်းလျက် Myanmar Youth Law Firm ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ဥပဒေ အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဝင်များကို စစ်အစိုးရမှ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ရှေ့နေလိုက်ခွင့်လိုင်စင်များကို ရုတ်သိမ်းခြင်းတို့ကို ကြံ့ကြံ့ခံလျက် ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသော ဦးမင်းကိုနိုင်နှင့် ဦးကိုကိုကြီးတို့ အတွက် အမှုလိုက်အကျိုးဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်း၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်ကြသည့် ဦးစောကျော်ကျော်မင်းမှာ စစ် အစိုးရ၏ ခြိမ်းခြောက်ရန်ရှာမှုကြောင့် ပြည်ပသို့ တိမ်းရှောင်ခဲ့ရသလို ဦးညီညီထွေးမှာလည်း ဖမ်းဆီးထောင်ချ ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ တရားမျှတမှုအတွက် ရဲရဲရင့်ရင့် ခုခံအကျိုးဆောင်ပေးတတ်သူတဦးဖြစ်သည့် ဦးဖိုးဖြူ ကိုယ်တိုင်လည်း တရားရုံးကို မထီမဲ့မြင်ပြုမှု အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, May 10, 2011
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Monday, May 09, 2011
ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ခရမ်းမြို့ မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်စိုး (ဆမ- ၉၅၄၅) မတရား ပြုနေတာတွေကို တင်ပြပေးထားတာ (၁လ) ပြည့်ပါပြီ။ လာရောက်စစ်ဆေးတာ အမှန်တရားကို မတွေ့ခဲ့လို့လား ?
ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်မကလို့ ခင်ဗျား ကိုယ်တိုင်လာစစ်လည်း ဘာမှမထူးတော့ဘူးဆိုတာ ကျုပ်တို့ မြို့သားတွေ အားလုံးသိလိုက်ပါပြီ။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး အသစ် တစ်ယေက်ရဲ့ ပထမဦးဆုံးအမူ ကဒီလိုပါလား?
ခင်ဗျား မသိချင် ယောင်ဆောင်နေလည်း ထပ်ပြောပြဦးမယ် ။
ခရမ်းမြို့က လူနာတွေ ကို နည်းနည်းလေး ချောင်းဆိုးတာနဲ့ TB ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ဆေးတွေ အတင်းသောက်ခိုင်း နောက်ပြီး ခင်ဗျားတို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ရန်ကုန်တိုင်း တစ်တိုင်းလုံးရဲ့ TBဆေးအထိရောက်ဆုံး ဆုဆိုပြီး ခင်ဗျားတို့ပဲ ဆုတော်ငွေ သိန်း(၇၀)ချီးမြှင့်ခဲ့ သေးတယ်လေ။ ခင်ဗျားတို့က လူသတ်သမားကို ဆေးထိုးအပ် ကိုင်ခိုင်းတာကိုး။ TB ရောဂါမရှိပဲ ဆေးသောက်ခဲ့ရတဲ့ လူနာတွေ အားလုံးကို မေးကြည့်စမ်းဗျာ၊ တစ်ဝက်လောက်က သေသွားပြီဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိရဲ့လား ? (သူ့ဆရာကလည်းတိုင်း ကျန်းမာရေးမှူးကိုး)
ခင်ဗျားတို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ကလည်း လာစစ်သွားတာ ဟုတ်ပါတယ်၊ Internet Websiteတွေနဲ့ DVB တို့မှာတင်ပြခဲ့ရင် ခဏတစ်ဖြုတ် လာစစ်တာက ခင်ဗျားတို့ အသစ်ပြောင်းလာကြတဲ့ လူကြီးတွေရဲ့ Formular လား ?
လူသတ်သမား ဆရာဝန်လုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေ၊ ဆိုင်ခန်းအကြောင်းတွေ၊ ဆေးတွေဈေးကြီးတာတွေ၊ အရိုက်ခံရတဲ့ အကြောင်းတွေ၊ လူနာတွေကို မတရားပြုနေတာတွေက မဟုတ်လို့လား? ဘာမှမတက်ပဲ အစာအိမ်ပေါက်တဲ့ လူနာနှစ်ယောက်ကို သူ့ဆီမှာ တစ်ပါတ်လောက် ကုတယ်၊ ခွဲစိတ်လိုက်၊ ပြန်ချုပ်လိုက်နဲ့ သေခါနီးမှ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကိုပို့တာ ခင်းဗျားတို့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးက ဆေးမှတ်တမ်းကို ပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ အဲဒီလူနှစ်ယေက် ဗိုက်တွေကို လာကြည့်စမ်းပါဗျာ… ကျုပ်တို့မြို့မှာ ရှိပါတယ်…။ သက်ဆိုင်ရာမှ အသေချာ ဆောင်ရွက် ပေးစေချင်ပါသည်....။
ခရမ်းမြို့နယ်၏ အရက်စက်ဆုံး မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီး အကြောင်း သိကောင်းစရာ (တိုင်ကြားစာ) ပြန်ဖတ်ချင်ရင် CLICK
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Sunday, May 08, 2011
ပျဉ်းမနားမြို့သကြားစက်ရုံက ၀န်ထမ်းတွေ လယ်ယာစိုက်...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး ဆန္ဒပြသပွဲ နှ...
The Voice ဂျာနယ် မေလ ဒုတိယပတ်...
မြန်မာ ပါကစ္စတန် အိန္ဒိယ ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့များ၊ ဥ...
ABMA Journal Volume2No 9..